Farshaxanka Logitech, oo aad uga badan kiiboodhka | Waxaan ka socdaa mac
Markii Logitech uu ku dhawaaqay kumbuyuutarkiisa cusub ee Craft aad bay u cadaatay in ay ahayd in la tijaabiyo haa ama haa. Waxaan jeclahay Mx Master 2s iyo Mx Ergo, kaliya maahan tayadooda qalab ahaan laakiin software-ka la socda taasina waxay kuu ogolaaneysaa inaad habeyso howlaha badhamadiisa iyo dhaqdhaqaaqooda.
Kiiboodh wireless ah, gadaal gadaal, oo leh naqshad wanaagsan oo dushiisa ah isla softiweer kaas oo aan aad u jeclahay ... Taasi waa in la caddeeyo shaki la'aan dhowr toddobaad ka dib anigoo isticmaalaya kumbuyuutarka maalin kasta waxaan kuu sheegi karaa qaangaarnimadayda dareenkaa. Gabagabada, marka la soo koobo, waa taas Waa kumbuyuutarka ugu fiican ee aad hadda ka iibsan karto Mac-gaaga. Falanqaynta sawirada iyo muuqaalka, hoos.
2 Iftiinka hore iyo batariga? Waxay leedahay qiimo
Waa kumbiyuutar kumbuyuutar wireless ah oo lagu farsameeyay aluminium iyo caag, oo leh qaababka furayaasha isbaanishka, keypad tiro, xasuusta ilaa 3 aaladood oo aad ku xiri karto iskana beddeli karto dhexdooda adoo riixaya badhamada go'an ee ay ku jiraan, leh nalka dambe ee is-hagaajiya oo toos u shidmaya markii uu gacmahaaga ka ogaado kumbuyuutarka, iyo in sidoo kale uu leeyahay isku xirnaanta Bluetooth iyo sidoo kale aaladda u gaarka ah ee qaata USB-ka oo ah 2,4GHz oo aad ugu xirmi karto illaa 6 qalab oo kala duwan. Batarigeeda 1500mAh waxaa lagu soo rogay USB-ka USB-C-ka oo ku jira sanduuqa.
Sawirradu iskood bay u hadlaan, markaa wax badan oo laga sheegayo ma jiro qaabka kumbuyuutarka. In kasta oo ay jiri doonaan fikrado dhadhan walba, waxay ila tahay aniga kumbuyuutar aad u fiican oo casri ah oo ka hadlaya tayada afarta dhinacba. Way culus tahay (960g), taas oo aan dhib lahayn maxaa yeelay maahan kumbuyuutar la qaadan karo, waxaanan u arkaa mid togan, maaddaama kumbuyuutarka uusan dhaqaajin ugu yaraan intaad isticmaaleyso.
Laakiin waxa ugu cajaa’ibka badan ee ku saabsan kumbuyuutarka, oo siiya aqoonsigiisa, waa wareegga wareega ee uu ku leeyahay geeska bidix ee kore, oo aan ku qaban karno Hawlaha gabi ahaanba la beddeli karo, maahan oo keliya nidaamka laftiisa, laakiin sidoo kale waa la hagaajin karaa iyadoo ku xiran codsiga aad isticmaasho. Laakiin arrintaas gadaal ayaan ka hadli doonnaa.
Iftiinka hore iyo batariga? Waxay leedahay qiimo
Waa lama huraan markaad isku daydo, waligoodna ma isticmaali doontid kiiboodh la'aan astaantan mar kale. Iftiiminta dhabarku waa shay u habboon inay ku habboon yihiin dhammaan teebabka tayada leh, laakiin midka ugu horreeya ee aan ku jirin waa Apple. Logitech ayaa sharad ku galay, wuxuuna ku sameeyay nidaam runtii aad u cajiiba. Si loo badbaadiyo batteriga iftiinka furaha wuxuu hagaajiyaa nalka deegaanka, laakiin had iyo jeer wuu shaqeeyaa. Waxay noqon kartaa wax aan macquul ahayn in la muujiyo kumbuyuutarka maalintii, laakiin maahan, ugu yaraan waan jeclahay.
Laakiin marka lagu daro la-qabsiga nalka wareega, kiiboodhku wuu damiyaa oo wuxuu ku xiran yahay isticmaalkiisa. Si fudud adoo gacmahaaga dul saaraya, adigoon taaban, nalka dambe ee gadaalku wuxuu sixran u daarayaa, iyo dhowr ilbiriqsi kadib markaad joojiso isticmaalkiisa, wuu damiyaa. Uma baahnid inaad sugto inaad riixdo fure uu nalku u soo muuqdo, sida kumbuyuutarrada kale, halkan wuxuu ku ogaanayaa inaad ciyaari doontid oo ka hor intaadan sameyn ayaad diyaar u tahay.
Tani waxay ku imaaneysaa qiimo: ismaamulku wuu ka fiicnaan karaa. Isticmaalkaygu aad buu u xoog badnaa oo si joogto ah ayuu u socday. Kuuboodhku wuxuu leeyahay badhan uu gabi ahaanba isaga demiyo, laakiin ma isticmaalo, ma lihi caadadaas. Qaabkan isticmaalka baytarigu wuxuu igu sii soconayaa illaa laba toddobaad, taas oo si saraaxad leh u fiican, laakiin anigu dan kama lihi. Sababtoo ah kumbuyuutarka ayaa kaaga digaya waqtiga si aad uga qaadatid labadaba ogeysiisyada shaashadda iyo laydh uu ku haysto geeska midig ee kore, iyo inuu casaan noqdo markii batterigu hooseeyo. Markay maalin uun ii iftiimayso casaan, habeenkaa aniga ayaa dul saaray oo maalinta xigta ayaan ka siibay.
Kiiboodhka ayaa loogu talagalay qorista, farshaxankan loo yaqaan 'Logitech Fraft' waa mid aad u raaxo badan iyada oo ay ugu wacan tahay cabirkiisa oo buuxa, furayaasheeda oo ka safar ka badan kiiboodhadhka balanbaalista ee Apple, waa mid deggan oo aad u raaxo badan in la isticmaalo dhowr saacadood dhibaato la'aan Furayaashu waxay leeyihiin ciriiri yar oo qaybta dhexe ah, iyo cabir iyo kala-goyn taas oo aan si dhakhso leh ula qabsaday. Kiiboodhka ayaa diyaar u ah in lagu isticmaalo Windows iyo Mac, waxba kama maqnaan doontid.
Laakiin muuqaalka xiddiga ee kumbuyuutarka ayaa shaki la'aan ah wareegga wareega. Iyada oo aan ku fulin karno hawlo kala duwan, dhammaantood waxay ka kooban yihiin codsiga Logitech Options oo aad ka soo dejisan karto bogga Logitech (isku xirka). Isugudub, dhex mari miisaska kumbuyuutarrada, isku shaandhee sawirrada, dhaweyso, qaado shaashadda… Fursadaha aad haysato marka aad dejineysid howlaha gawaarida wareega waa kuwo aad u weyn, oo haddii aadan ka heli karin midka aad rabto ee ka mid ah kuwa ku jira arjiga, waxaad had iyo jeer ku wareejin kartaa tuuryo kumbuyuutar si aad u muujisid, markaa fursadaha waa kuwo aan dhammaad lahayn.
Laakiin sidoo kale waad u habeyn kartaa howlaha giraangirta si gaar ah codsi kasta, si marka aad u wareegeyso Chrome aad u dhex marto tabka furan iyo marka aad sidaas ku sameyneyso Ereyga waxaad si toos ah ugu dhex socotaa bogga aad daawaneysid. Haddii aad haysato qalab kale sida Mx Master ama Mx Master 2s mouse, ama Mx Ergo trackball, fursadaha ayaa tarmi doona, maxaa yeelay adoo riixaya furaha Farshaxanka Logitech iyo sameynta tilmaamaha jiirka waxaad yeelan doontaa hawlo cusub oo suurtagal ah. Ujeeddadu waxay tahay inaad wax walba ku haysato farahaaga adigoon ka soo qaadin kumbuyuutarka, Farsamadan Logitech ayaa qabata.
Kiiboodhka Logitech Craft wuxuu ku dhacaa jacaylka aragtida koowaad naqshadeynta, tayada dhismaha iyo astaamaheeda sida nalka dambe. Laakiin. Haddii aad sidoo kale ku weheliso aalado kale oo summad leh, oo ay weheliso softiweerka ikhtiyaariyada 'Logitech Options', fursadaha lagu horumarinayo wax-soo-saarkaaga ayaa tarmaya Iyada oo qiimaha inta badan ku dhowaad € 150-160 gudaha Amazon, ma heli doontid kumbuyuutar kafiican Mac-gaaga.
Iftiinka tooska ah ee tooska ah iyo tooska ah
Giraangiraha wareega ee shaqooyinka la beddeli karo
Kiiboodh aad u raaxo badan oo raaxo leh oo leh saddex xusuus
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Farshaxanka Logitech, oo aad uga badan kiiboodhka
Kumbuyuutarka aad ayuu u fiican yahay oo si fiican loo sameeyay, wuxuu ku xanuunsanayaa inaad ku xirto bluetooth-ga markasta oo la daarayo iyo maalinta oo dhan. Xaji dhab ah oo la safeeyey. Batterigu ma sii soconayo ama lama filaan ayuu giraangirku u shaqeeyaa sida qurxinta maxaa yeelay barnaamijyada sida Photoshop ma shaqeeyaan mana qabtaan wax uusan kumbiyuutar kale shaqeyn. Waa lacag lumis iyo is daba marin Logitech ah.
Anigana waxaan 2 sano ku hayaa kumbuyuutarka aan waligiis shaqeynin, waxay ku beddeleen mid kale iyo mid la mid ah. Waxaan dib ugu noqday kiiboodhka Apple.
Horumariyayaashu waxay Apple ugu hanjabeen inaysan sii deyn doonin ciyaaro badan oo macOS ah